Xawaalaadaha Soomaalida ee Minnesota oo Ku Heshiiyey in qiimaha xawaaladu uusan ka sara marin kana hoos marin 5%( ama boqolkiiba 5$)
Agoosto 8, 2002
Kadib markii ku dhawaad hal todobaad uu qasnaa suuqa & sicirka xawaalada ee gobolkan minnesota ayeey shalay galabtii (Agoosto 7) ku guuleysteen ineey kulan ku yeeshaan magaaladan minneapolis xawilaadlayaasha soomaalida.
heshiiskan cusub ayaa la isku afgartay in qiimaha xawaaladu uusan ka sara marin kana hoos marin 5% ama boqolkiiba 5$, falanqeyn dheer & wada hadal waqti dheer jiitamayey kadib ayeey xawilaadlayaashu qalinka ku duugeen go'aankan cusub, si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah xawilaadlayaasha ayaananba ka qeyb galin shirkii shalaytoole, waxaana ka mid ah shirkadda Towfiiq oo ii sheegay ineeyanba waxba kala socon shirka noocan ah.
dabayaaqadii todobaadkii tagay ayeey aheyd markii qaar ka mid ah shirkaduhu gaarsiiyeen sicirka xawilaada heerkii ugu hooseeyey ee abid soo mara minnesota oo ah 3% ama 3$ boqolkiiba, walow uu guud ahaan sicirku sabeynayey todobaadkii tagay oo dhan haddana xawilaadlayaashu weey ku kala duwanaayeen qiimaha xawilaada.
tan iyo markii irdaha loo laabay shirkadii barakat ayaa waxaa suuqyada gobolkan minnesota ku soo badanayey ilaha xawilaada, wuxuuna qiimaha u badnaa tan & waagaas 7% ama 7$ boqolkiiba, walow la dhimayey qiimaha xawilaada marka uu qofku xawilanayo lacag ka badan 500$.
gobolkan minnesota ayaa ah xarunta ugu muhiimsan ganacsiga xawilaada soomaalida dunida oo dhan, maxaa yeelay tirada soomaalida oo sii badanaysa & dhexdhexaad dadka gobolkan oo dira lacag gaareysa 300$ bishiiba.
Arrinta sheegida mudan ayaa ah in xawilaadlayaashu hore ugu heshiiyeen arrimo noocan oo kale ah, ha yeeshee eey ku fashilmeen ineey sicir isla saangooyaan, waxaase leys heybinayaa suura galnimada heshiiskan cusub eey shalay wada gaareen xawilaadlayaashu.